साहीशासनको झल्को दिनेगरी कालीकोटमा प्रहरी र सेनाको अप्रेशन, गाउँनै आतंकित !
ARCHIVE, SPECIAL » साहीशासनको झल्को दिनेगरी कालीकोटमा प्रहरी र सेनाको अप्रेशन, गाउँनै आतंकित !
कालीकोट-कालीकोटको मालकोटमा दोहोरो भिडन्त हुँदा प्रहरीको गोली लागि घाइते भएका धनरु बटालाको मृत्यु भएपछि नेपाल प्रहरी सेनाले गाउँमा सान्त्वना दिनुपर्ने ठाउँमा आतंक मच्चाएको खबर छ । पत्रकार जन्मदेव जैशीले दिएको जानकारी अनुसार अहिले नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले गाउँ-गाउँ छिर्ने र गाउँ-गाउँमा आतंक मच्चाएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र बिकले दिएको जानकारी हिजो प्रहरी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा गोली चलेको थियो भने नेकपाका कार्यकर्ताहरुसँग हार खाएर प्रहरीले हतियार छोडेर भागेको थियो । यता यता घटना लुकाउन प्रशासनले समेत जोड बल गरीरहेको, र सत्तानिकट पत्रकारहरुलाई आफ्नो पक्षमा समाचार लेख्न लगाइएको स्थानीय पत्रकारहरुले जानकारी दिएका छन् ।